लक्ष्मी गदालमाथि कसले गर्यो भौतिक आक्र’म’ण ! [भिडियो सहित] – Khabarhouse
लक्ष्मी गदालमाथि कसले गर्यो भौतिक आक्र’म’ण ! [भिडियो सहित]
Khabar house | २० बैशाख २०७८, सोमबार ०२:३४ | Comments
काठमाडौं : लक्ष्मी गदालमाथि भौ’तिक आ’क्र म’ण भएको छ । आफुलाई महिला अधिकारकर्मी बताउने श्रीजना वाग्लेले लक्ष्मी गदालको कोठाको ढोका फो’डेर कु’टपि ट गर्दै का’लो मोसो द’लेकी हुन् । केहि युटुबर र महिला सहयोगी लिएर गएकी वाग्लेले गु’ण्डा गर्दी शैलीमा लक्ष्मी गदाल माथि आ’क्र म’ण गरेकी हुन् ।
आफुलाई महिला अधिकारकर्मी बताउने श्रीजना वाग्लेले जब’र्जस्ति लक्षि गदाल बस्दै आएको कोठाको ढोका समेत फो’डेकी छन । उनको आ’क्र म’णबाट लक्ष्मी गदाको हातमा चो’ट लागेको छ। किशोर खतिवडा र लक्ष्मी गदालको बि’बादको बिषयमा मुछिएकी वाग्लेले १० लाख मा’ग्न लगाएको आरोप लक्ष्मीले लगाएकी थिइन ।
एक्लै कोठामा बसिरहेकी लक्ष्मीलाई आफु सहित केहि महिला लिएर गएकी वाग्लेले कोठामा तो’डफोड गर्दै आ’क्र म’णमा उत्रेकी थिइन । घ’टना भएपछी किशोर खतिवडा पुगेका थिए । श्रीजनाले किशोर माथि पनि आ’क्र म’णको प्रयाश गरिएकी थिइन ।उ’ग्र रुपमा प्रस्तुत भएकी वाग्लेले समाजले पचाउन नसक्ने अप’शब्द समेत बोलेकी थिइन । भिडियो यहाँ लिंकमा छ ।